आत्महत्यामा उक्साउनेलाई ज्यानमुद्दा - Dainik Nepal
आत्महत्यामा उक्साउनेलाई ज्यानमुद्दा
काठमाडौं, २९ माघ । तपाईंका काम वा आनिबानीले अरूलाई आत्महत्या गर्ने मनस्थितिमा धकेलेको त छैन ? अथवा तपाईंका गतिविधिले यस्तो काममा कसैलाई दुरुत्साहन (कानुनी वा नैतिक दृष्टिले अवैध कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नु वा उक्साउनु) पो गरेको छ कि ? त्यसो हो भने, सचेत हुनुहोस् है। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
किनकि, भदौदेखि लागू भएको फौजदारी अपराध संहितालाई टेकेर प्रहरीले राजधानीमा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोपमा तीन जनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको छ। यसअघि आत्महत्याका घटनामा प्रहरीले शव पोस्टमार्टम गरी सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारलाई बुझाउँदै आएको थियो। कमै मात्र घटना शंकास्पद रूपमा हेरेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले अहिले भने आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको परिवारबाट उजुरी आए विस्तृत छानबिन गर्न थालेको छ।
आन्तरिक कलह र त्यसबाट उत्पन्न आवेश आत्महत्याको कारण भएको पछिल्ला प्रहरी अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। पुसमा सम्झना भनिने रोशनी तामाङ काठमाडौं महानगरपालिका–२६ मित्रनगरस्थित एक गेस्ट हाउसमा सलले पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिइन्। रोशनीका परिवारले प्रहरीमा उजुरी दिए।
प्रहरीले अनन्त मगर भनिने धनबहादुर स्माइली मगरलाई पक्राउ ग‍र्‍यो। फौजदारी अपराध संहिताको दफा १८५ अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो। रोशनीले आत्महत्या गर्नुको पछाडि उनलाई घर जान नदिनु कारण रहेको अनुसन्धानमा खुल्यो। अपराध संहिताको दफा १८५ (आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने) को उपदफा १ मा ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन नहुने’ प्रावधान छ। उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने’ प्रावधान छ।
धनबहादुर र रोसनी रिलेसनसिपमा थिए। घर जान नदिएको निहुँमा रोशनीले आत्महत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुल्यो। प्रहरीले पछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलायो। मगर अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा पुर्पक्षमा छन्।
असोज १३ गते कपनमा २६ वर्षीया प्रकृति राईले आत्महत्या गरिन्। विवाह भएको पाँच वर्षमै राईले आत्महत्या गरेपछि उनको परिवारले ज्वाइँ प्रकाश खत्रीविरुद्ध फौजदारी अपराध संहितालाई नै टेकेर प्रहरीमा उजुरी दिए।
प्रहरीको छानविनबाट विवाह भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बच्चा नभएपछि खत्रीले राईलाई कुटपिट मात्रै गरेनन्, बरु कान्छी श्रीमती ल्याएको रहस्य खुल्यो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा पुरानो रितपूर्वकको जाहेरीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा छानबिन अघि बढायो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा बुझाउँदा अदालतले खत्रीविरुद्ध ५० हजार धरौटी तोक्यो। खत्री धरौटीमा छुटे पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता डीएसपी होवीन्द्र बोगटीले नयाँ फौजदारी अपराध संहिता लागू भएपछि आत्महत्याका घटनामा प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको बताए। ‘आत्महत्याको घटना पनि पीडित परिवारले कर्तव्य ज्यान मुद्दामै जाहेरी ल्याउँछन्। तर अनुसन्धान त्यति सजिलो छैन’, उनले भने, ‘अहिले फौजदारी संहिता आएपछि अलि सजिलो भएको छ।’
बोगटीका अनुसार काठमाडौंमा आत्महत्याको घटनालाई लिएर अनुसन्धान गर्दा पीडक पक्ष खुलेर कारबाहीमा परेको यो पहिलो घटना हो।